Iprofayile yenkampani - Weifang Naipute Gas Genset Co., Ltd.
I-Weifang Naipute Gas Genset Co., Ltd. yasekwa ngo-2008. IOfisi ibekwe kwikomkhulu lesiseko kwisixeko saseWeifang, kwiphondo laseShandong kwaye kukho ukugcwala okufanelekileyo kunye nokusingqongileyo okumnandi ngeenxa zonke. Umzi-mveliso ubekwe kwiPaka yoPhuhliso lweMveliso ePhambili ngenkxaso karhulumente kunye nomoya olungileyo weshishini. Ukusukela ukuba uphawu lwe-NPT lusetiwe, iimveliso eziphambili ziiseti zejenereyitha yegesi eyi-10kW-1000kW, kubandakanya iseti yegesi yendalo, iseti yejogas generator, iseti yegesi yegesi yegesi, iseti yomvelisi wegesi yamalahle, iseti yejenereta yerhasi yegesi njl.njl. I-NPT ijolise ekusebenziseni amandla acocekileyo, ukukhusela okusingqongileyo kunye nokunciphisa iindleko zokusebenza. Iqela le-R & D yenkampani ye-NPT kunye neqela lolawulo linamava atyebileyo kwi-R & D, kwimveliso nakulawulo. Kule minyaka, i-NPT iye yakha iqela lobuchwephesha elinobuchwephesha obuhle kunye nomlinganiswa omkhulu.
Itekhnoloji ikhokelela kwiimveliso. Imveliso yokuveliswa kwe-NPT ngokwenkqubo yokuvelisa yenzululwazi yokuvelisa ngokungqongqo, xuba eyona nto iphambili ekuphuhlisweni kwemveliso kwaye igcine unxibelelwano lwexesha elide kunye nentsebenziswano namaziko ophuhliso awaziwayo kunye neekholeji, ezinje nge-AVL kunye ne-FEV njlnjl. Ukulinganisa ukusebenza, ukukhula komzekelo, ukuphuculwa kwendlela yokusebenza, ukulinganiswa kovavanyo kunye nophuhliso lokuthembeka kuye kwahambelana ngokungqongqo nenkqubo yesayensi. uthotho lwemveliso ye-NPT ibandakanya i-NQ, i-NW, i-NS, i-ND kunye ne-NY kunye noluhlu lwamandla lubandakanya i-10 kW ukuya kwi-1000 kW.
Weifang Naipute Irhasi Genset Co., Ltd.
Iqela lethu liye labandakanyeka kwi-R & D yeemveliso zamandla egesi ngaphezu kweminyaka engama-30 kwi-injini enkulu yaseChina
Iseti yokuvelisa igesi ye-NPT ipasile ukuqinisekiswa kwenkqubo esemgangathweni ye-ISO9001 kunye nokuqinisekiswa kwe-CE. Iiparamitha zobuchwephesha ziyahlangabezana nemigangatho ye-China GB / T8190 (ISO8178). Ukhuseleko, ukuhlala ixesha elide kunye nokukhuselwa kwendalo esingqongileyo kuyiphumezile iMimiselo yeSizwe yoShishino. Kule mihla, iiseti zokuvelisa igesi ye-NPT ziye zamkelwa jikelele kwaye zixabiswa kakhulu ngabathengi basekhaya nakwamanye amazwe. Kwaye ziye zonyuselwa ngokubanzi kwaye zasetyenziswa kwiinkalo ezininzi, ezinje ngeshishini leoyile, ishishini legesi yendalo, indawo enkulu yokuzalela imfuyo, iprojekthi ye-biogas ephakathi kunye enkulu, umgodi wamalahle, indawo yokulahla inkunkuma njalo njalo. Okwangoku, iimveliso ze-NPT zithunyelwe kumazwe aphantse angama-40 nakwimimandla, enje ngeJamani, i-United Kingdom, iMelika, iJapan, iCzech, iSpain, iSri Lanka, i-Itali, iAustralia neFrance njlnjl. ukusebenza.
Inezinto eziphambili zokuvavanya amandla, ifanisa iimeko zokusetyenziswa komsebenzisi, kwaye ijongisisa ngokungqongqo uyilo lwemveliso kunye nemveliso kunye nenkqubo yovavanyo;
Uthathe inxaxheba kuphando nakwiiprojekthi zophuhliso kwicandelo lamandla erhasi, waphumelela amawonga enkqubela phambili kwezenzululwazi nezobuchwepheshe ezikhutshwe ngoorhulumente kuwo onke amanqanaba;
Inkampani yethu iye yasekwa win-win ubudlelwane nentsebenziswano qhinga kunye nabenzi zasekhaya abadumileyo injini, R ngokudibeneyo & D kunye nemveliso iyalelwe.
Inkampani ye-NPT ineenjineli ezininzi, iqela lethu le-R & D linokuqhuba noyilo lwemveliso ekhethekileyo kunye neengcebiso ngokweemfuno zomsebenzisi;
Yonke into ofuna ukuyifumana ngathi